Chinja PDF kuIzwi kubva kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Zvirokwazvo iwe unotoziva nzira yekubva kune yekuzvarwa Microsoft Hofisi gwaro kuenda kuPDP uchishandisa mashandiro akaisirwa muMicrosoft hofisi suite kana urikushandisa neWine paGNU / Linux. Uye kunyangwe iwe ukashandisa LibreOffice kana imwe hofisi suite, zvakare zvichave nyore kwauri kuti uendese gwaro rako ku PDF format kuigovana nenzira yakasununguka nekuda kwezvishandiso izvo zvinotobatanidza iyi mhando ye suite. Usati wafanirwa kuenda nekushandisa zvimwe zvishandiso zveizvi, ipapo mamwe mapulagi akasvika kuti azviite uye pakupedzisira ivo vatove vakabatanidzwa mumasuti.
Asi izvi hazvisi izvo zvatichatsanangura muchinyorwa chino, asi chinotifadza ndechekuchinja maitiro, ndiko kuti, chinja iyo PDF kuve gwaro reIzwi kana LibreOffice, ngazvive izvo .doc, .docx, nezvimwe. Uye kunyangwe zvisiri zvechinyakare sekushandurwa kushandurwa kwandatsanangura mundima yekutanga, kune vanhu vazhinji vanofanirwa kushandura zvinyorwa zvePDF kuita fomati ine hushamwari kuti vazvigadzire. Ndosaka tichazotsanangudza nyore matanho ekushandura PDF kuita Izwi.
1 Ndeupi mutsauko uripo pakati pePDF nemamwe mafomati:
2 Maitiro ekushandura Izwi kuita PDF:
2.1 Kubva kuMicrosoft Office:
2.2 Kubva kuLibreOffice / OpenOffice:
3 Chinja PDF kuIzwi
Ndeupi mutsauko uripo pakati pePDF nemamwe mafomati:
PDF inomirira Portable Gwaro Fomati, ndokuti, inotakurika gwaro fomati. Yakagadzirwa neAdobe Systems uye parizvino ndeimwe yemafomati anozivikanwa zvakanyanya sezvo iri yakazvimiririra pasoftware uye mapuratifomu ehurdware atinoshandisa, saka inotakurika. Izvi zvinoreva kuti isu tichakwanisa kuona zvirimo kubva kune akati wandei akasiyana masisitimu anoshanda uye zvirongwa, izvo zvinoita kuti ive mambo weInternet kuti asvike makomputa akasarudzika akadaro aripo.
Yakave yakakosha zvekuti yakaverengerwa muna2008 pasi peIO 32000-1, asi kwete ese mabhenefiti, kutakurika kwakadai, kureruka kwekutarisa, kukura kudiki, uye kugadzirisa kwehunhu, inewo chiso chayo chakavanzika. Semuenzaniso, kugadzirisa aya mafaera ePDF zvinoreva kutenga software yakabhadharwa, senge zvigadzirwa zveAdobe Acrobat mune yavo vhezheni dzePRO. Kuve kwakaomarara kugadzirisa kana kusakwanisika pasina chaiyo software, zvinonetsa kushanda nayo uye ndosaka ichitsvaga kuishandura kuita gwaro rinogadziriswa sezvatichakudzidzisa mune ino dzidziso.
Nenzira, ichokwadi kuti kune dzimwe nzira dzeLinux dzakadai se PDF Studio Pro kana PDF Hora, asi nokutendeseka dzimwe nzira hadzina kukura zvakakwana kana kukwana seAdobe's ...
Maitiro ekushandura Izwi kuita PDF:
Kubva kuMicrosoft Office:
Kuti ushandure kubva kune chero hofisi hofisi, ingave iyo .doc, .docx, .ppt, .pptx,. nezvimwewo, kana iwe ukashanda nehofisi suite ye Microsoft Office kana Hofisi 365 kubva padandemutande rewebhu, iwe unogona kutevedzera anotevera matanho ekushandurira kuita PDF fomati
Vhura chirongwa chaunoda kushanda kubva. Inogona kuve Izwi, PowerPoint, nezvimwe.
Enda kuFaira menyu.
Dzvanya pakutumira kunze.
Uye sarudza iyo PDF fomati.
Mune inodonhedza menyu iwe unogona kusarudza zita reGwaro rePDF uye kwaunogona kuichengeta, pamwe nekusarudza pakati peyakajairwa kana yakajeka fomati (kunyanya yekutsikisa online). Kana iwe ukaratidza sarudzo, zvakare ichakubvumidza iwe kusarudza iwo mapeji ekushandura, mabhukumaki, nezvimwe.
Kana uchibvuma uye nekuchengetedza, iro hofisi gwaro rinotanga kutumirwa kuPDF uye tichava naro rakagadzirira.
Zvakafanana kana uchishanda kubva iyo Hofisi webhu interface mugore kana kubva kuMicrosoft Office 365 hofisi maapplication eApple ...
Kubva kuLibreOffice / OpenOffice:
Kana iwe uri kushandisa yemahara hofisi suite, zvakare yakafanana kana yakapusa. Kubva LibreOffice kana OpenOffice iwe unofanirwa kutevedzera nhanho idzi:
Vhura chirongwa chauri kushanda nacho, semuenzaniso Mharidzo, Munyori, ...
Iine gwaro raunoda kuendesa kuPDP yakavhurika, enda kuFaira menyu.
Sarudza iyo Export kune PDF sarudzo.
Sarudza zita uye pekuchengetedza.
Wagadzirira, watove nePDF yako yakagadzirwa.
Chinja PDF kuIzwi
Panyaya yekudzokorodza mashandiro, mahofisi masutu kazhinji haana sarudzo dzekushandura iyo PDF kuita gwaro rinogadzirisika, kana kana vakadaro, ivo havaratidzike senge mune sarudzo yesarudzo yekushandura gwaro kuita PDF. Semuenzaniso, kana isu tine LibreOffice yakaiswa (uye iyo libreoffice-yakajairika package) mukugovera kwedu, isu tinokwanisa kushandisa iri nyore kuraira kushandura PDF kune imwe yemafomati anoenderana neyedu yatinofarira yemahara suite. Akazviita sei? Zvakanaka, nenzira iyi:
Nezvo isu tinokwanisa kushandura gwaro rakatumidzwa zita.pdf (iyo yaunofanira kutsiva iine zita rePDF yako) mu .doc kuti ugone kuigadzirisa zvakanaka. Ehe iwe unofanirwa kuimhanyisa kubva kudhairekitori iyo iyo PDF iri kushanda ... Kana iwe uchida iwe unogona kushandura iyo fomati yedhodhi yeiyo imwe yakadai se .odt, nezvimwe.
Imwe nzira Inogona kunge iri pano, mune iyi kesi yeIzwi-rinoenderana .docx:
Uye zvechokwadi havazi ivo chete sarudzo dzekuita mhando iyi yekutendeuka, kune dzimwe nzira. Kana iwe uchida iwe unogona kuisa iyo package Abiword ndokumhanya iwo unotevera kuraira:
El yekupedzisira zviwanikwa chingave chekutora Adobe Acrobar Pro software kuti ikwanise kugadzirisa maPDF kana kuashandura kuti aite mamwe mafomati, pakati payo pane .doc uye .docx pakati pevamwe. Asi pane izvo iwe unofanirwa kushandisa muchina chaiwo neMac kana Windows kuti ugone kuimhanyisa, kana kuisa zvakananga Adobe Acrobat Pro nerubatsiro rweWine.
Kana usina chokwadi, usakanganwa siya zvaunotaura...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Chinja PDF kuIzwi kubva kuLinux
Javier Montalban akadaro
Master PDF mupepeti wePDF mafaera, pane vhezheni yeWindows, Mac uye GNU / Linux.
Pindura Javier Montalban
Francisco Sánchez Tinao akadaro
Inkscape, iwe unotora, kugadzirisa uye kutumira kunze
Pindura Francisco Sánchez Tineo
mune libreoffice dhizaini iwe unogona kuendesa, kugadzirisa uye kutumira kunze
5 makomendi akadaro
Hapana, ini handikwanise kushandura pdf kuita .doc kana .docx. Ini ndinofungidzira kuti ndakaomarara: chii chandakatadza?:
mushandisi @ MyNewPC: ~ / Desktop $ libreoffice –isingaoneke - shandura-kuita docx: »MS Word 2007 XML» Pepa rekuzivisa chizvarwa.pdf
(soffice: 10110): Gdk-YAMBIRO **: gdk_window_set_icon_list: mifananidzo yakanyanya
Error: source file yatadza kutakurwa
mushandisi @ MyNewPC: ~ / Desktop $ soffice –infilter = »munyori_pdf_import» –shandura-ku doc ​​dhijitari Yekuzivisa pepa.pdf
(soffice: 10155): Gdk-YAMBIRO **: gdk_window_set_icon_list: mifananidzo yakanyanya
Pindura kumashoko mashanu
Kupfuudza kuPDF kubva kuLinux, Windows kana chero OS yako ndinozviita kubva pamapeji ewebhu. Pane mapeji akati wandei ekushandura kuita PDF ini ndinoshandisa izvi https://convertirwordapdf.com/
AMDGPU mutyairi achavandudza Linux 4.17 kernel